जुन ८० वर्षीयालाई कंगनाले सय रुपैयाँमा उपलब्ध बताएकी थिइन्; उनले भनिन्, ‘उनी पागल हुन्, खेतीबारे उनलाई के थाहा ?’ | Ratopati
कंगना रनौटले किसान अन्दोलनसँग जोडेर जुन हजुरआमाको मजाक उडाएकी थिइन्, अब उनले कंगनालाई जवाफ फर्काएकी छिन् । भारतीय मिडियासँगको कुराकानीमा ती वृद्धाले कंगनालाई पागल बताएकी छिन् र कंगनाले आफूमाथि लगाएको आरोपलाई गलत भनेकी छिन् ।
कंगनालाई के थाहा, खेती के हो ?
एबीपी न्यूजसँगको कुराकानीमा८० वर्षकी वृद्धा मोहिन्दर कौरले भनिन्, ‘कंगनालाई के थाहा, खेती के हो ? उनी पागल हुन्, उनले जे पनि भनेकी छिन्, त्यसमा धिक्कार छ । कंगनालाई के थाहा किसानको कमाई कति हुन्छ । जब पसिना बग्छ, रगत तातो हुन्छ तब मात्रै पैसा आउँछ । किसानी गरेर पैसा कमाउन निकै मुश्किल छ । कंगनाले ममाथि निकै गलत आरोप लगाएकी छिन् ।’
कंगनाले के भनेकी थिइन् ?
कंगनाले मोहिन्दर कौरसँग जोडिएको एक पोस्ट सेयर गर्दै लेखेकी थिइन्, ‘हाहाहा, उनी त्यहि हजुरआमा हुन् जसलाई टाइम म्यागजिनको कभरमा सबैभन्दा शक्तिशाली भारतीय बताइएको थियो । र उनी सय रुपैयाँमा उपलब्ध छिन् । पाकिस्तानी पत्रकारले भारतका लागि निकै लज्जास्पद तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय पिआर हाइज्याक गरेको छ । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोल्नका लागि आफ्नै मानिसको आवश्यकता छ ।’
कंगनाले नाम नै नलिई मोहिन्दर कौरलाई शाहिन बागमा सीएए र एनआरसीको विरोधमा समावेश भएकी बिलकिस बाने बताएकी थिइन् । यद्यपि, जब उनलाई ट्रोल गरियो तब उनले आफ्नो पोस्ट डिलिट गरेकी थिइन् ।
सय रुपैयाँले मैले के गर्ने ?
मोहिन्दरले उक्त अन्तर्वार्तामा सय रुपैयाँ कमेन्टमाथि पनि प्रतिक्रिया दिएकी छिन्, ‘मेरो खेतमा काम कहिल्यै कमी हुँदैन । यस्तोमा म सय रुपैयाँका लागि प्रदर्शनमा समावेश हुन किन जान्छु ? कंगनाले जे भनेकी छिन् त्यो गलत हो । ’
उनले कंगनालाई कसैका लागि पनि गलत नबोलिदिन सुझाएकी छिन् ।